Andriamanitra tsy azo antsoina hoe Allah | Apg29
Andriamanitra tsy azo antsoina hoe Allah
Allah dia tsy Andriamanitry ny Baiboly, dia nambara koa ao amin'ny fanekem-pinoana silamo.
Hiaiky izy ireo avy eo fa Allah no hany andriamanitra ary izany dia tsy ny Baiboly Andriamanitra. Fa amin'ny teny soedoa ankehitriny no diso rehefa Allah adika hoe "Andriamanitra".
Io fanontaniana io, dia fohy ihany koa ny manome valin ' ny fangatahana pejy .
Ary ianao efa nanao lahatsary fa Allah sy ny Kristiana amin'Andriamanitra telo izay iray Andriamanitra dia iray ihany. Ataony ahoana moa no rehefa samy finoana silamo sy ny Kristianisma dia monina any Jodaisma sy ny Jiosy rehetra mpaminany ao amin'ny CORAN Silamo?
Ny Baiboly dia tsy antsoina hoe Andriamanitra Allah. Ny anarany YHWH - Jehovah. Io anarana io koa i Jesosy.
Romana 10: 9. Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no Tompo, sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao.
Ve Allah sy YHWH ho Andriamanitra dia iray ihany, izay azo antoka fa i Jesosy no antsoina hoe Allah.
Allah dia tsy Andriamanitry ny Baiboly, dia nambara koa ao amin'ny fanekem-pinoana silamo:
"Tsy misy hafa Andriamanitra noho ny Allah ary Muhammad dia ilay mpitondra hafatry ny Allah ."
Amin'ny teny arabo dia hoe "Andriamanitra" sy ny "Allah". Izany dia izao no teny hafa, izay manambara fa tsy midika an'Andriamanitra. Hiaiky izy ireo avy eo fa Allah no hany andriamanitra ary izany dia tsy ny Baiboly Andriamanitra. Fa amin'ny teny soedoa ankehitriny no diso rehefa Allah adika hoe "Andriamanitra". Angamba satria any Andrefana dia sahiran-tsaina mba hino fa izany no toetry ny Kristiana Andriamanitra.
Fa "Allah" dia anarana izay midika hoe "andriamanitra lehibe indrindra" fa ny teny hoe, nefa tsy ny hoe ny Baiboly Andriamanitra. Nisy 300 sampy tao Lameka. Amin'ireo, ny lehibe indrindra Allah andriamanitry ny Mohammed naka ka nanao azy ho ilay Andriamanitra.
Andriamanitra dia manana zanaka
Andriamanitry ny Baiboly dia manana zazalahy, izay voalaza imbetsaka ao na ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.
Teny 30: 4 Iza no efa niakatra tany an-danitra, ary nidina indray? Iza no nahangona ny rivotra tao an-tànany? Iza no nahafono ny rano tamin'ny lambany? Iza no nanorina ny tany rehetra ny fetra? Iza no anarany, ary iza no zanany - fantatrao ny Mazava ho azy?
Tamin'ny 11: 1 Raha mbola zaza Isiraely tiako izy, ary avy tany Egypta ny zanako no niantso.
2 Samoela 7: 14.Jag ho rainy, ary izy ho zanako. Raha manao izay meloka izy, dia hanariko amin'ny hazo, ka ny olona matetika, sy ny kapoky ny zanak 'olombelona.
Salamo 2: 7 no hotoriko ny fanapahan-kevitry ny Tompo. Ary hoy izy tamiko: "Ianao no Zanako, Androany no niteraka anao."
Jaona 3:18. Na iza na iza mino Azy dia tsy helohina, fa izay tsy mino voaheloka rahateo satria tsy nino ny Zanaka Lahitokana.
Jaona 5:25. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, Izaho milaza aminareo hoe: Misy tonga ny fotoana, ka efa eto, raha izay handrenesan'ny maty ny feon'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona.
Jaona 9:35. Jesosy nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy izy, dia hoy izy taminy: Mino ve Ianareo fa ny Zanak 'Andriamanitra?
Jaona 10:36. ka hoy ianareo: 'Ilay Ray efa nohamasinina, ka nirahiny ho amin'izao tontolo izao: ianao hiteny ratsy, satria hoy Izaho: Zanak'Andriamanitra Aho' Andriamanitra.
Andriamanitra (ny Ray) milaza fa manam-zazalahy
Matio 3:17. Ary, indro, nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako. Ao aminy no tsara sitrapo.
Matio 17: 5 Raha mbola niteny izy, indro, efa nanaloka noho ny an'ny mamiratra rahona, ary, indro, nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: Ity no Zanako malalako, izay ao Aminy no tsara sitrapo. Henoy izy.
Marka 1:11. Ary nisy feo avy tany an-danitra: Hianao no Zanako malalako, Izay sitrako.
Marka 9: 7 Ary nisy rahona niseho nanarona azy ireo izany, ary avy tao amin'ny rahona tonga ny feo nanao hoe: Ity no Zanako malalako. Henoy Izy!
Allah tsy manan-janakalahy
Fa ao amin'ny CORAN dia milaza mazava fa tsy manan-janakalahy Allah.
Allah dia tsy nanao ny tenany ho zazalahy, ary tsy misy andriamani-kafa afa-tsy Aminy; Raha izany dia efa nanaiky andriamanitra tsirairay izay efa namoronana azy, ary ny sasany dia azo antoka fa niezaka ny hahazo hanjaka ny hafa. (CORAN 23:29)
"Ary ny Jiosy hoe:" Ezra no zanak'Andriamanitra ", ary ny Kristianina hoe:" Kristy no Zanak 'Andriamanitra. "Misy nanao tamin'ny vavany, dia manahaka sägelserna avy amin'ireo izay tsy nino taloha. Ny fanozonana ho aminy, ny fomba dia voafitaka lavitra ny fahamarinana!" (CORAN 9:30)
Jaona 3:16. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, izay rehetra mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
2 Kor 5:19. Fa Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, fa tsy hanisa azy ny fahotany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana.
CORAN Allah tsy naniraka zazalahy ho an'izao tontolo izao izy, satria tsy manan-janakalahy.
Noho izany, dia tsy azo vonjena ao Allah toy ny misy an'i YHWH - Jehovah - satria tsy misy reconciler ao amin'ny CORAN.
iray hafa i Jesosy
Ankoatra izany, ny CORAN Jesosy hafa noho izay ny Baiboly, ary mijoro ho vavolombelona. Ireo olona roa samy hafa tanteraka. "Jesoa" ao amin'ny CORAN tanteraka mandeha manohitra izay lazain'ny Baiboly momba an'i Jesosy.
"Ary (tsarovy) tamin'i Jesosy, zanak'i Maria, dia nilaza hoe:" Oh ankizy ny Isiraely! Izaho no Andriamanitra ny Mpaminany ho anao, mba hahazo antoka ny Torah (izay tonga) eo anoloako, ary manome anao filazantsaran'ny mpitondra hafatra-hanaraka Ahy, ka ny anarany dia ho Ahmad. "Fa raha (Mohammad Ahmed) tonga azy ireo porofo mazava, dia hoy izy: "Izao no majika fotsiny" (Quran 61: 6)
Mety ho toy izany koa i Jesosy, izany hoe ny "Jesoa" ao amin'ny CORAN tanteraka hanohitra ny tenany. Tsy vitan'ny mifanohitra ny tenany, fa mandà ny tenany.
Jesosy no Voalohany sy Farany
Up 1: 8. Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, hoy ny Tompo, izay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha.
Araka ny Baiboly, dia tsy Muhammad ny Anjelin'Andriamanitra, na ny iraka, satria nitsangan-ko velona i Jesoa milaza fa Izy no fiandohana sy ny fiafarana. Alfa sy Omega dia ny litera voalohany sy farany amin'ny abidy grika. Amin'ny teny hafa, i Jesoa no ilay Voalohany sy Farany. Tsy misy olona tonga teo anatrehan'i Jesosy sy tsy misy ta-hanaraka an'i Jesosy. Muhammad tonga an-jatony taona maro hanaraka an'i Jesosy. Noho izany dia manaporofo fa I Mohammed no mpaminany sandoka.